Ọrụ igwe milling - OUZHAN TRADE (SHANGHAI) CO., LTD
Na-eduga nkenke CNC Milling Service-OEM / ODM China CNC Milling / Mill Parts Manufacturer
You chọrọ onye a pụrụ ịdabere na ya CNC igweonye ọ bụla nwere àgwà na-enweghị atụ? Ouzhan Trade (Shanghai) Co., Ltd. bụ ọkachamara na ahụmahụ China CNC ụlọ ọrụ na-enye nkenkeỌrụ igwe igwe CNC nwere igwe di elu tinyere CNC igwesite na 3 axis ruo 5 axis na ndị injinia nwere nkà. Ha na-enwe ike ịchọta ụzọ kachasị mma iji mepụta kachasị mmaCNC milled akụkụ na mmiri maka ndị ahịa.
Site na ike siri ike na afọ nke ahụmịhe bara ụba, anyị nwere ike ịnye ọkwa dị elu ma dị ọnụ ala Ọrụ igwe igwe CNC gụnyere 3-axis CNC igwe etiti na 5-axis CNC igwe ebe a na-ahụ maka ihe ndị a na-agba ọsọ ọsọ na CNC, na-eme ngwa ngwa na-adọkpụ, yana ọ dị mma CNC igwena-atụgharị. Anyị elu-edu ngwa ngwa CNC-egwe ọka ngwaahịa na-etinye aka na ubi nke akpaaka ụlọ ọrụ, aerogenerator, ụgbọala akụkụ machining, igwe-egwe ọka, ọgwụ na ahụ ike, ụlọ nyocha akụrụngwa, ọkụ akụkụ machining, wdg
Ouzhan nkenke CNC Milling ikike na atụmatụ:
- afọ 15 nke ahụmịhe na etu esi amata na Ọrụ igwe CNC, Ouzhan tumadi na-enye OEM / ODM Ọrụ igwe milling na yiri ngwaahịa gụnyere nkenke egwe ọka, metal-egwe ọka, plastic mlling, wdg
- Nkwado obere, ọkara na nnukwu olu ogbe mmepụta.
- Otutu prototyping na ọgwụgwụ na-eji n'ichepụta.
- Ọdịdị dị elu dị elu, nrụpụta ọsọ ọsọ na ntụkwasị obi dị elu.
- Wide nke nhọrọ ọla na plastik.
- Chọrọ agwụ na uko tolerances dị.
- Karịrị 20 tent nke elu CNC igwe igwe na Ouzhan.
Ntak emi Họrọ Ouzhan CNC igwe Services
Anyị isi n'ichepụta ngwaọrụ na-imported si Switzerland na Japan, nke nwere ike inye ndị ahịa na-elu nkenke (± 0.01mm) na ọnụ ala CNC igwe ọnụahịa.
2.Multiple CNC n'ichepụta ike
Na mgbakwunye na-egwe ọka, anyị ipuiche tụgharịa, lathing, mkpọpu ala, Ọrụ CNC na-egwe ọka, Ya mere ị nwere ike nweta nnukwu nhọrọ nke CNC machined akụkụ site na ndị otu anyị tụkwasịrị obi.
Anyị nwere ọkachamara àgwà nnyocha pesonel & equipments, dị ka mba ụkpụrụ gị ngwaahịa nwalee, na inye a zuru ezu ule akụkọ maka ndị ahịa ' CNC machining akụkụ.
Ahaziri nha na shapes dị. Nabata ịkọrọ gị eserese 2D ma ọ bụ 3D nke gị CNC machining akụkụ na anyị, ka anyị rụọ ọrụ ọnụ iji mee ka ndụ kee ihe.
Gịnị Bụ CNC igwe Service & Olee otú CNC igwe Ọrụ
CNC igwe bụ a subtractive n'ichepụta usoro na ngwa ngwa ewepu ihe onwunwe si metal ma ọ bụ plastic nkanka na-emepụta nkenke akụkụ na uko tolerances.
CNC igwekachasị mma dị ka usoro nke abụọ ma ọ bụ nke agwụcha maka ngwa ọrụ arụburu arụ ọrụ, na-enye nkọwapụta ma ọ bụ na-emepụta atụmatụ akụkụ ahụ, dịka oghere, oghere, na eri. Otú ọ dị, a na-ejikwa usoro ahụ akpụzi mpempe ngwaahịa site na mmalite ruo na njedebe. N'ọnọdụ abụọ ahụ, usoro ịgha ọka jiri nwayọọ nwayọọ wepụ ihe iji mepụta ọdịdị chọrọ na ụdị nke akụkụ ahụ. Nke mbụ, ngwá ọrụ ahụ na-egbutu iberibe iberibe — yabụ, mpe mpe mpe mpe n’ime ihe omume ahụ iji mepụta ọdịdị na ọdịdị nke ha. Mgbe ahụ, ihe eji arụ ọrụ ahụ na-enweta usoro egwe ọka na oke ziri ezi dị elu yana oke nkenke iji rụchaa akụkụ ahụ na njirimara ya na nkọwa ya. A, a dechara akụkụ na-achọ ọtụtụ machining gafere iji nweta chọrọ nkenke na ndidi. Maka akụkụ ndị ọzọ dị mgbagwoju anya nke geometrically, enwere ike ịchọ ọtụtụ ntọala igwe iji mezue usoro ịme ihe.
Ngwongwo ihe igwe CNC - Ihe eji eme ihe maka igwe CNC
E nwere ihe maka CNC igwe
Garolite G-10 Garolite G-10 Garolite G-10 Garolite G-10 nke Garolite
Ọla kọpa C101 Ọla kọpa C101
Naịlọn 30% GF naịlọn 30% GF naịlọn 30% GF
Ngwa nke CNC Milling Services and Parts
Nke a bụ nhọrọ dịgasị iche iche nke ọrụ ọlachachachachacha nke ọrụ ị họọrọ maka akụkụ igwe CNC, iji meziwanye akụkụ ahụ, ịdị nro dị elu, nkwụsị nke corrosion, na njirimara ndị ọzọ: